सलाह भङ्ग गर्ने कुराहरु-
सलाह पढिरहेको बेला हात, अनुहार वा कुनै वस्तुसँग खेल्नु नराम्रो कुरा हो। .
१- जानेर वा बिर्सेर सलाहका आधारहरु छोड्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ।
२- जानी-जानी सलाहका अनिवार्य कुरा छोड्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ।
३- जानी-जानी सलाहमा कुराकानी गर्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ।
४- जोडले हाँस्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ।
५- आवश्यक बिना धेरै खटपट र यताउता गर्नाले सलाह भङ्ग हुन्छ।
सलाहमा हुन गएको त्रुटीहरुलाई पूरा गर्न अल्लाहले यी दुई सज्दाहरु गर्न आदेश दिनु भएको छ।
सज्दा सहु कुन बेला गर्नु पर्छ?
निम्न लिखित अवस्थामा सज्दा सहु गर्नु पर्दछ-
Read more: सज्दा सहु
यात्रीले यात्रा तथा छोटो विश्रामको बेला जो चार दिन भन्दा कम नहोस्, कसर सलाह पढ्नु सुन्न्त हो। कसर भनेको चार रकातको ठाउँमा मात्र दुई रकात पढ्नु पर्दछ, जस्तै… जुहर, अस्र र ईशाको सलाहलाई मात्र दुई रकात पढ्नु। तर यदि कुनै मुकीम (स्थानीय) इमामको पछाडि सलाह पढिरहेको छ भने इमामको अनुसरणमा पूरा चार रकात पढ्नु पर्दछ।
सुन्नत सलाहहरु माफ गरिएका छन्, तर फज्र र वित्रकोको सुन्नत पढ्नु पर्दछ।
यात्रीको सहजताको लागि दुई समयको सलाहलाई एकै समयमा पढ्न जायज गरिएको छ, जस्तै… जुहर र अस्रलाई जुहर वा अस्रको समयमा तथा मग्रिब र ईशालाई मग्रिबकै समयमा वा ढिलो गरी ईशाको समयमा पढ्न सकिन्छ।
जबसम्म एउटा मुस्लिममा चेतना र होश हुन्छ, त्यसबेलासम्म उसले अनिवार्य रुपमा सलाह पढ्नु पर्छ, तर इस्लामले मानिसको अवस्था र परिस्थितिलाई सधैं कदर गरेको छ, तीमध्ये बिरामीको अवस्था हो।
Read more: बिरामीको सलाह
Read more: जुमाको सलाह
Read more: जमातको सलाह
मानिसलाई सलाहको समय भएको सूचना तथा जानकारी दिनको लागि अल्लाहले मुस्लिमहरुका लागि अजान दिन आदेश दिनु भएको छ। शुरुमा सलाहको लागि धेरै प्रतिक्षा गर्नु पर्थ्यो, कसैले कसैलाई पुकार्दैन्थ्यो, किनकि त्यतिबेला अजानको नियमै थिएन। एक दिन यसैको विषयमा सानोतिनो बैठक भयो। कसैले क्रिस्चियन जस्तै संख फुँकने र
कसैले यहूदी जस्तै नरसिंधा फुँकने सुझाव राख्यो तर उमर (रजियल्लाहु अन्हु) ले अजान दिने सुझाव दिनु भयो। त्यसपछि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले बिलाललाई सम्बोधन गर्दै भन्नु भयो… “हे बिलाल ! उभ र मानिसलाई सलाहको लागि बोलाऊ।” (श्रोत- बुखारी : ५७९, मुस्लिम : ३७७)
Read more: अजान
यदि कसैले बिना कुनै कारण रमजानको दिनमा ब्रत भङ्ग गरेको छ, उसले अल्लाहको अगाडि आफ्नो पाप र अवज्ञाको तौबा (प्रायश्चित) गर्नु पर्छ र त्यस दिनको कजा (पूरा) पनि। यदि कसैले सम्भोग गरेर ब्रत भङ्ग गरेको छ, उसले कजा (पूरा) गर्नुका साथै कफ्फारा (जरिवाना) पनि दिनु पर्छ। कफ्फारा : एउटा गुलाम (दास) आजाद गर्नु, दास पाएन भने दुई महिना लगातार ब्रत बस्नु र यसको शक्ति छैन भने साठी जना गरीबलाई खाना खुवाउनु पर्छ। इस्लामले धेरै जसो अवस्थामा मानव अधिकारको लागि दासलाई मुक्त पर्ने आदेश दिएको छ।
अल्लाहले सालमा एक महिनाको ब्रत अनिवार्य गर्नु भएको छ, तर बढी पुण्यको लागि नफ्ली (ऐच्छिक) ब्रत बस्ने प्रेरणा दिनु भएको छ। केही नफ्ली ब्रतहरु यस प्रकार छन्…
Read more: नफ्ली (ऐच्छिक) ब्रत